Nezvedu | Huai'an Zhili Pipe Viwanda Technology Co, Ltd.
pombi yekuvaka yevagari
pasi kupisa pombi
pombi yekushongedza imba
Huai'an Zhili Pipe Viwanda Technology Co, Ltd.
inyanzvi inoshanda mukutsvagisa nekusimudzira, kugadzira,
kutengesa seimwe yeakanakisa mapaipi vagadziri,
iyo bhizinesi inoshanda iyo "chiremba pombi" mhando,
iyo huru yekuvhara yepamusoro-kumagumo PPR pombi, PERT pasi kupisa pombi, pvc-u drainage pombi, magetsi casing uye mamwe akazara akateedzana uye anotsigira zvigadzirwa.
Iyo kambani yakazvipira kutsvagisa kwepombi fittings uye akasiyana epurasitiki anoumba kwemakore mazhinji, achigara achimhanya neyepasi rose, epamberi tekinoroji, manejimendi manejimendi akagadzira yakanakisa mhando uye yakanakisa brand. Inoenderera sumo yezvigadzirwa zvitsva zvevatengi kuunza rakapfuma sarudzo. Huai'an Zhili Pipe Viwanda Technology Co, Ltd.
Dr Guan Mapaipi akamisikidza yesainzi uye tekinoroji yekutsvagisa murabhoritari nzvimbo, yakaunza akawanda pombi uye pombi otomatiki yekugadzira mitsara, makomputa otomatiki pombi uye pombi yekugadzira michina, akawanda-chikamu chikamu jekiseni kuumbwa michina uye zvimwe pombi yekugadzira michina yezvivakwa. Panguva imwecheteyo, vanogadzira mapayipi vanobhadhara zvakanyanya vanoshandirwa, vachivimba nemakore ekuziva nehunyanzvi hwekugadzira pombi, nerubatsiro rwepuratifomu yeR & D yakazara, uye vachishandisa yakakwana midziyo yekuyedza kuitisa bvunzo uye kumanikidza bvunzo pane imwe neimwe batch yezvigadzirwa, uye takazvipira kusimudzira nekuvandudza mapaipi. Unza mapaipi ane hutano, akachengeteka uye ane zvakatikomberedza kune vatengi, upe mhando kune vashandisi, uye uunze pombi yega yega izere nefilosofi yehutano kumhuri yega yega inofara.
Iyo kambani ine hunyanzvi hwekuyedza nzvimbo, inotumirwa pombi kumanikidza tester, kudonhedza sando kukanganisa tester, Vicat softening tester uye imwe yekuyedza michina, uye inoshandisa iyo yese maitiro mhando kutonga kubva kune yakasvibirira zvinhu zvekuchengetedza kusvika pakupedza chigadzirwa kuburitswa.
Pipe yakakodzera yekugadzira musangano
Kugadzira chiratidzo, isu tinofanirwa kutanga taita mhando
Nyanzvi ichaenderera mberi
Tsika ndiko kubatana kwebhizinesi
Chengetedza kubudirira kwepombi pombi seyakanakira yemabatiro ekugadzirisa mapaipi echiremba, kusimudzira kuvandudzwa kwemugwagwa webhangi nehunhu hwayo, uye kuona zano rekuvandudza re "kushambadzira kunofanira kutanga kuve mhando".
Dr. Guan Pipe anotenda zvine mutsindo kuti chete kugadzirwa kwehunyanzvi ndiko kunogona kuwana zvigadzirwa zvakachengeteka, ongororo yehunyanzvi chete ndiyo inogona kuchinjisa kuvimba kwevashandisi, uye masevhisi ehunyanzvi chete ndiwo anogona kugadzira kukosha kwechiratidzo, saka tinoziva kuti chete chiratidzo chehunyanzvi chinogona kuita kuti tiende. kure.
Kutanga kubva pahunhu, isu tinoshandisa tsika kusimudzira hunhu hwevashandi, uye kushandisa tsika yaDr Guan kukurudzira hunyanzvi hwevashandi, uye pakupedzisira tigoita tsika yemubatanidzwa iri yaDr Guan uye yekambani tsika yaDr Guan .
"Kuzadzikisa zvaunoda nezvigadzirwa zvemhando yepamusoro uye nehanya nebasa" ndiwo musimboti wepayipi raDr Guan. Nezvinodiwa nevatengi seyakadzika uye nhungamiro, kuvaka sisitimu yebasa revatengi uye nzira dzebasa dzinosangana nezvinodiwa nemushandisi, uye kuvaka timu yebasa revatengi nekugutsikana kwevashandisi sechinangwa chebasa. Sisitimu yebasa revatengi ye "Chiremba Guan Pipeline" mhando inotevedzera zvakafanana sevhisi manejimendi manejimendi uye inopa masevhisi ane yunifomu emhando yepamusoro kune vashandisi kutenderera nyika.
Nyatso tsigira nekushandisa iyo yenyika "Chigadzirwa Chemhando Yemutemo" uye "Kodzero dzeVatengi Kudzivirirwa Mutemo." Kuzadzikiswa kuzere kwe ISO9001-2008 mhando manejimendi manejimendi sisitimu uye ISO14001 yemamiriro ekuchengetedza manejimendi sisitimu yekugadzira mureza chigadzirwa dhizaini, R&D, uye kugadzirwa musika zvinoda-kutariswa, zvinotarisana nekudzivirirwa kwezvakatipoteredza, tekinoroji, hunhu, fashoni uye chigadzirwa tsika.
Kuti uve nechokwadi chekuda kwevashandisi, Dr. Guan Pipeline zvakare inokupa iwe "mhando yepamusoro, inoshanda, inokurumidza, uye chaiyo" masevhisi, uye nemoyo wese inopa vatengi nehungwaru uye kufunga kwehunyanzvi rutsigiro.
Technical kubvunza: chigadzirwa dhizaini paramita, nyanzvi terminology, chigadzirwa mashandiro uye inoenderana ruzivo mhinduro dzemapaipi uye zvigadzirwa; kugadzirwa kwechigadzirwa.
Nhungamiro yekuvaka: Nekufambira mberi kwakanaka kwekuvaka, Dr. Guan Pipeline inogona kutumira mainjiniya nevashandi vehunyanzvi kunzvimbo yekuvaka kutungamira kuvaka uye kumisikidza zvinoenderana nezvinodiwa nemutengi.
Kubhadharisa kutaurirana: Kana paine chirongwa chekubhidha, Dr. Guan Pipeline inogona kupa nyanzvi nehunyanzvi vashandi kuti vape yakazara yakazara masevhisi kune vatengi.
Mari bhajeti: Zvinoenderana nezvinodiwa nemadhirowa, Dr. Guan Pipeline anohaya nyanzvi kuti vabhadhare zvinhu zvevatengi.
Iyo kambani yakave yakazvipira kutsvagisa kwepombi fittings uye dzakasiyana epurasitiki kuumbwa kwemakore mazhinji, kugara uchichengeta nhanho neyekunze, tekinoroji yepamusoro, manejimendi manejimendi akagadzira mhando yepamusoro uye yakanaka mhando.
Adress: Kwete. 118-7, Kumabvazuva kweShenzhen Road, Qingjiangpu Dunhu, Huaian Guta